CERN inomira kushandisa zvirongwa zveMicrosoft kutanga kushandisa yakavhurwa sosi | Linux Vakapindwa muropa
CERN inomira kushandisa zvirongwa zveMicrosoft kutanga kushandisa yakavhurika sosi
El CERN (European Organisation yeNyukireya Ongororo) European, kana kuti cathedral yesainzi seinodanwa nevazhinji, iye aitozivikanwa nekushandisa kugoverwa kweGNU / Linux kwemakomputa ake uye supercomputer. Kunyanya yaive Scientific Linux, yakavakirwa paRHEL, asi ipapo vakagadzira yazvino uno CCentSO (CERN CentOS), vhezheni yeCentOS yakakosha pamashandisirwo eCERN uye kuti iwe unogona kuwana nekurodha mahara pawebhusaiti yavo, sezvazvaive zvakaitika neSainzi Linux.
CERN ndiye rimwe remarabhoritari makuru epasi pevhu uye akakosha pasi rese. Mazhinji masayendisiti akanakisa anobva kunyika dzakasiyana siyana anoshanda ipapo uye kuongorora mavambo epasi, zvinhu, uye zvinhu zvakawanda zvakakosha kune ramangwana revanhu. Uye zvese nekutenda kune chidimbu chinowedzera, iyo Huru Hadron Collider (LHC). Munguva yekuyedza, zviuru zvemagigabytes eruzivo zvinogadzirwa izvo zvinofanirwa kugadziriswa nekuchengetwa nekukurumidza.
Ndo izvo supercomputer iri munzvimbo yedata yavanayo iriko inotarisira, neGNU / Linux, nenzira ... Asi zvisinei nekurumbidza kwese kwandinogona kupa kune iyi huru murabhoritari, nhau izvozvi ndedzekuti vari kumira vachishandisa Microsoft software uye kutanga kushandisa yakavhurika sosi software. Izvi zvinovatendera kusevha hombe mari kumarezinesi kuti vakwanise kuisa mari mune zvimwe zvinangwa zvine zvibereko.
Una kuwedzera kwemitengo mumarezinesi vakaita kuti izvi zvikwanisike. CERN haigone kutambisa mari yakawandisa pamalayisensi uye ivo vari kubheja pasoftware yemahara. Semuenzaniso, gore rakapfuura ivo vakatanga MAlt (Microsoft Dzimwe nzira Project), ane zita rinotaura zvese. Vari kutsvaga dzimwe nzira, ivo vari kutama masisitimu uye kushandisa yemahara uye yakavhurika sosi software kune iro basa rinoitwa nevashandi vavo ipapo. Pasina mubvunzo akanaka kwazvo. Ndinovimba kuti akawanda uye makuru masangano nemakambani achatevera nzira imwe chete iyi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » CERN inomira kushandisa zvirongwa zveMicrosoft kutanga kushandisa yakavhurika sosi
Kutanga kururamisa kudiki: Sayenzi Linux kutenderera kweFedora (hongu iyo yakavakirwa paRHEL saizvozvo).
Chinondishamisa ndechekuti CERN haisati yambozviita, semuenzaniso pavakabva kuFedora kuenda kuCentOS (notabene yakadonha kubva kuFedora neRHEL). Uku kwave kutoda kuve shanduko, nekuti kana vangozviisa, sei vasina kuita shanduko yakakwana?
Makuhwa: Tim Berners-Lee akashanda kuCERN (ini handizive kana achiri kudaro) paakasika HTML neWorld Wide Web. Muchokwadi, chikumbiro chakabva pane zvaidiwa neCERN.
Kugadzira tafura yedhatabhesi neLibreOffice Base varoyi
GIMP 2.10.12 inowedzera chishandiso chitsva cheOsetset uye zvimwe zvigadziriso zvidiki